दुध किन्न ....................
Posted by tshrestha at 5:21 AM 1 comment:
Posted by tshrestha at 5:10 AM No comments:
अब यस्तै २-३ जनासंग नियमित मेसेन्जरमा भेट हुन थाल्यो। पछि हुंदा हुदै
एकजना संग मात्र बढि सम्पर्क हुने हुन थाल्यो। भुषण र तारा ३५ र ३३
वर्षका काठमाण्डौंकै दम्पति हुन्। भुषण एक सिभिल इन्जिनियर हुन् र एउता
बिदेशी consultant को नेपाल प्रोजेक्ट अफिसमा काम गर्छन्। तारा चाहिं
आफ्ना दुइ केटाकेटीहरुलाइ हेर्न र हुर्काउन घरधन्दामा नै लागेका रहेछन्।
अरु दाजु भाइहरु पनि सबै आआफ्नै घरमा छुट्टा छुट्टै settle भइसकेका छन्।
“हामी दुइ हाम्रा दुइ”को यो सुखी परिवार पनि नेपालको मध्यम बर्गीय
परिवारको अर्को साधारण उदाहरण हो।
सेक्सको विषयमा सागर र पार्वतीको जस्तै भुषण र ताराको पनि भिन्न भिन्न
तरिकाहरु कोशिस गर्ने रहर रहेछ। भुषणले हङ्गकङ्गबाट एउटा खेलौना लाडो
(dildo vibrator) किनेर ल्याएको रहेछ। 69 पोजिशनमा एकअर्काको गुप्ताङ्ग
चुस्दा भुषण त्यो ६ इन्चको खेलौना लाडो ताराको पुतिमा पसाउँछन। अनि
साँचैको जस्तो देखिने त्यो लाडो आफ्नो स्वास्नीको योनिमा भित्र बाहिर
गराउदै योनि र लाडो दुबै चुस्छन्। तारालाइ पनि यो निकै मनपर्छ। अरुबेला
मन नपराए पनि यो पोजिशनमा यदि भुषणले उनको मुखमै बीर्य निकाले पनि उनी
यी सबै कुराहरु हप्तौं, महिनौंको राति रातिको मेसेन्जर च्याट पछि एक
अर्कालाइ आफ्ना अनुभवहरु सुनाउने क्रममा भुषणले सागरलाइ ब्यक्त गरेका
थिए। साँचै भेट अझसम्म नभएपनि मेसेन्जरमा नियमित भेट हुंदाहुंदै उनीहरु
वास्तबमै धेरै नजिकिसकेका थिए। आफ्नो यौनचाहनाहरु र अनुभवहरुको अब
निसंकोच आदानप्रदान हुन थालेको थियो। आफ्नो शरिरहरुको पुरा बयान विशेषगरि
उचाइ, तौल, स्तन र लिङ्गहरुको साइज, आकार, गुप्ताङ्गका रौं खौरिएको वा
नखौरिएको आदिको कुरा गर्दा गर्दा नदेखेपनि अर्को जोडी कस्तो देखिंदा हुन्
भन्ने पुरा अनुमान उनीहरुमा हुन थालिसकेको थियो। एक अर्कोको गोप्यतालाइ
कदर गरेर उनीहरुले आफ्नो अनुहार देखिने फोटोहरु भने अझसम्म देखाएका
थिएनन्। तर गुप्ताङ्गहरुको नजिकैबाट खिंचिएका close up फोटोहरु मात्र
होइन योनिमा लाडो पस्दै गरेको सफा डिजिटल फोटोहरु पनि अब आदान प्रदान
हुनथालिसकेको थियो। भुषण र तारा दुबैको गुप्ताङ्गहरु सफाचट हुने गरी रौं
खौरिएको रहेछ। सागर र पार्वतीको भने कालो जंगल नै रहेछ। पछि ताराले
मेसेन्जरमा बाक्लो झ्याउ राम्रो नलागेको कमेण्ट गरे पछि सागरले पनि सफाचट
पारेको फोटो पठायो। चाकमा लाडो घुसाउँदा दुख्ने भएकोले भुषण र तारा
गुदामैथुन नगर्ने रहेछन्। तर सागर र पार्वती कहिलेकाहिं चाकमा पनि
एक दिन भुषणले अलि भिन्न किसिमको फोटो पठायो। त्यो फोटोमा भाइब्रेटर लाडो
ताराको योनिमा घुसेको थियो भने भुषणको जिब्रोको टुप्पाले लाडो पसेकै
थाउँमै योनि छोइराखेको थियो। यस्ले उनीहरुको सम्बन्धलाइ अर्को चरणमा
पुय्राउन ठुलै सहयोग गय्रो। भयो के भने त्यो खेलौना लाडो सागर र
पार्वतीहरुलाइ पनि प्रयोग गर्न मन लाग्यो र भुषण र सागर भेटेर त्यो लिने
दिने कुरा भयो। दुबैको मोबाइल फोन नम्बरहरु सातासात भयो र पहिलो पल्ट
फोनमा उनीहरुको कुराकानी भयो। सुरुमा दुबैको आवाज अलि नर्भस भएजस्तो
लाग्थ्यो तर केहि बेरमै एकदम घनिष्ठ साथीहरु जस्तै कुरा हुन थाल्यो।
कुराकानीको अन्त्यतिर फोटोको फेरि कुरा भयो अनि बिना कुनै हिच्किचाहत
दुबैले (सागर र भुषणले) अनुहार देखिने साधारण फोटोहरु पथाए। “पहिले
देख्नुभएको थियो मलाइ?”, “खै देखे देखे जस्तो लाग्छ”। “anyway अब भेटे
पछि बढि चिनिन्छ नि”
र बेकरी क्याफेमा पहिलो भेट भयो सागर र भुषणको। कफी खाँदै बिभिन्न
कुराहरु भयो। हुन त कुराको विषय भने बढिनै प्रोजेक्ट र बिजनेशमा
केन्द्रित रह्यो। अनि अन्त्यमा मुख्य कुरा भयो – सागरले भुषणबाट एउता
प्याकेट पायो। “instruction पनि भित्र नै छ” भुषणले भन्यो। दुबै दंग परेर
भुषणलाइ भेटेको त्यो सांझ सागर समाचार हेरे पछि संधैजसो आफ्नो कोठामा
गएको थियो। पार्वती आउन कति ढिलो गरे जस्तो उस्लाइ लागिराखेको थियो।
कामधन्दा भ्याएर छोरीलाइ हजुरआमाकहाँ सुताएर पार्वती पनि आइपुगिन्।
सागरले भाइब्रेटर तकिया मुनि लुकाएको थियो। दुबै जना बेडमा अंगालो मारेर
पल्टे पछि संधैजसो सागर पार्वतीको बुबु मुसार्न थाल्यो भने पार्वतीको हात
सिधै उसको कट्टुभित्रको लाडो समाउन पुग्यो। एकैक्षणमा दुबै नांगो भए। दुध
चुस्दै सागर बिस्तारै तलतिर लाग्यो र पार्वतीको योनि खान पुग्यो। आफुपनि
पछादि खुत्ता उथाएर आफ्नो लाडो पार्वतीको मुखमा लगिदियो। 69 पोजिसनमा
एकअर्कालाइ पुरै उत्तेजित गरेपछि सागर पल्टियो र पार्वतीलाइ उसको माथि
फेरि 69 पोजिसनमा तानेर पुय्रायो। जिब्रोले जिस्क्याउँदै गरेको पार्वतीको
पुतिमा संधैजस्तो उसको औंला घुसिराखेको थियो। उसले तकिया मुनिबाट त्यो
भाइब्रेटर झिक्यो र औंलाको थाउंमा त्यो मोटो लाडो घुसाएर भाइब्रेटरको
स्वीच अन गरिदियो।
पार्वतीलाइ अलि अचम्म लाग्यो र आफ्नो हात तल ल्याएर त्यसलाइ त्याप्प
समातेर माथि लगेर हेर्न लग्यो। अनि एक किसिमको हाँसो पनि चल्यो – कस्तो
साँचैको जस्तो, अनि कति मोटो नि! “हेर, साँचै नै पो ल्याएको रहेछ। लाज
लागेन तपाइलाइ उसंग भेट्दा?” अब कामभन्दा कुरा बढि हुनथाल्यो।
भाइब्रेटरलाइ साइडमा राखेर सोझो किसिमले पार्वतीको माथि चढेर बिस्तारै
बिस्तारै चिक्दै उनीहरु कुरा गर्दै थिए। निश्चय पनि ख्याल ख्यालमा
जिस्किएजस्तो थालेको कुरा आज धेरै अगादि पुगेको थियो र यस्ले दुबैलाइ
बढिनै गम्भीर बनाएको थियो। त्यो दिन (रात) भाइब्रेटरको खासै प्रयोग नै
भएन। सेक्स सकिए पछि धेरै बेर कुराकानी भयो। पार्वतीले भेटको सबै ब्यहोरा
सोधिन् – के के कुरा भयो, कस्तो ब्यबहार थियो आदि आदि। पछि दुबै निदाए।
राति एकचोटि पार्वती ब्युँझिइन् अनि फेरि सुत्न खोज्दा उनलाइ नीद आइरहेको
थिएन्। मनमा अनेकौं कुराहरु खेलिराखेको थियो। सागर त मस्तसंग सुतिराखेको
थियो। कता कता उनलाइ करिब दश बर्ष अगादिको जस्तो मनोदशाले पिरलिराखेको
थियो। उनी बाइस वर्षकि थिइन् जब उनले आफ्नो कुमारीत्व गुमाएकी थिइन्।
त्यो रात पनि उनी यसरी नै सुत्न सकेको थिएन। हुन त आज त्योबेला जस्तो
खासै केहि भैहालेको थिएन। सागरसंगको सेक्स त नियमित कुरा नै थियो तर आज
पटक पटक उनको सोचाइ कम्प्युटरमा देखेको भुषणको हाँसिराखेको सिङ्गल फोटोमा
गइराखेको थियो। प्रेमविबाह गरेर सागरबाहेक अरू कुनै केटासंग कहिल्यै
यौनसम्पर्क नगरेका पार्वतीको लागि पटक पटक भुषणको कल्पना आइराखेको उनकै
लागि पनि अचम्म थियो। निद्रा नलागेकोले कोल्टे फेर्दै उनी बेडको छेउ
पुगिन् । अनि अनायसै उनको हात बेडमुनि भएको भाइब्रेटरमा पय्रो। उनले बेड
छेउको बत्ती बालिन् र भाइब्रेटरलाइ नियालेर हेरिन्। कम्प्युटरमा देखेको
भुषणको लिङ्ग त्यहि जस्तो लाग्यो। अनि झतपत परपुरुषको लिङ्ग छोएको जस्तो
लागेर भाइब्रेटरलाइ फेरि बेडमुनि मिल्काइ दियो र बत्ती निभाएर फेरी
सुत्ने कोशिस गरिन् ।
Posted by tshrestha at 5:01 AM No comments:
आफ्ना यौनाङ्काक्षा र सोचाइहरुको आदानप्रदान पछि भुषण र ताराको भाइब्रेटर सागर र पार्वतीले प्रयोग गर्न दिएपछि पहिलो पटक उनीहरु बीच सीधा भेट भएको थियो। भाइब्रेटर प्रयोग गरेर आफ्नो योनिमा एकैसाथ लाडो र मुखको अनुभव गरेको रात पार्वतीलाइ सुत्न गाहारो भइराखेको थियो। अब अगादि …….. तर निद भने अझै आइरहेको थिएन्। किन किन उनलाइ आज आफुले पहिलो पल्ट गरेको सहबासको याद आइराखेको थियो। बीबीएस गरिराख्दा एउटा कम्प्युटर ट्रेनिङ्गको बेला उनको भेट सागरसंग भएको थियो। सागर त्यसबेला भर्खरै पढाइ सकेर त्यस ट्रेनिङ्ग इन्स्टिच्यूतमा काम गर्न सुरु गरेका थिए। भेटघात बिस्तारै प्रेममा परिवर्त्तन भयो। उनीहरु हरेक दिनजसो नै भेत्थे, अनि सागरसंग मोटरसाइकलमा बसेर बिभिन्न थाउँहरु घुम्न जान्थे, रेस्टुराँमा खान्थे। समय निकै रमाइलो थियो। रेस्टुराँको तेबलमा पहिलो पल्ट काउकुति लाग्ने गरि एकअर्काको हात समातेर मुसारेको थिए उनिहरुले। अनि एकदिन चोभार घुम्न जाँदा जंगलतिर पसेर धेरैबेर मायाप्रितिको कुरा गरे र यस क्रममा उनीहरुको बीच पहिलो पल्ट ओठ ओठको गहिरो चुम्बन भएको थियो। अनि त्यहिं अंगालोमा चुम्बन गर्दा गर्दै सागरले पहिलो पटक पार्वतीको लुगामाथिबाट स्तन छोएको थियो। त्यसपछिका एकान्त भेटघातमा किस गर्नु नियमित जस्तै भएको थियो। एक दिन अंगालो मारेर किस गर्दै हातहरु जीउभरि सलबलाउँदै गर्दा सागरले पार्वतीको हातलाइ पाइण्टमाथिबाट उस्को लिङ्गको स्पर्श गराएको थियो। अनि उसको हात पनि सलवार कुर्ताको माथिबाट उनको योनि र चाकक्षेत्रमा निकै काउकुती लाग्ने गरी सलबलाएको थियो। एक दिन घुम्ने क्रममा उनीहरु नगरकोट जाँदै थिए। डाँदामाथि पु्ग्न लागेको बेला पानी परेर दुबैजना निथ्रुक्कै भिजे। अनि पहिलो पुगिएको होटलमा पसे। तातो चिया अर्डर गरेर तेबुलमा बसे। चिसोले पार्वती लगलग काम्न लागेको थियो। चिया दिन आएको होटलवालाले उनीहरु भिजेको देखेर रुमालहरु र कोठा अफर गय्रो। अरु कुनै उपाय थिएन, ठिकैमानेर दुबैजना एउटा कोठामा पसे। कोठामा पस्ने बित्तिकै सागरले ढोका बन्द गरे। अलि लज्जा अलि डर र धेरै प्यार र चाहनाको वातावरणमा उनीहरु तुरन्तै अँगालोमा बाँधिए। दुबैको सबै लुगा देखि भित्र जीउ सम्मै निथ्रुक्कै भिजेको थियो। र यो भिजेको शरिरले उनीहरुलाइ झनै रोमान्चित गर्नलागेको थियो। अनि भिजेको लुगा लगाइ राख्ने कुरा पनि भएन्। बेडमाथि राखिएको एउटा तौलिया लिएर पार्वती बाथरुममा पसिन्। उनको ब्रा र अण्डरवेयर समेत भिजेको थियो। कपाल पुछेर एउटा तौलिया टाउकोमा बेरिन्। अनि माथिको लुगा खोलेर निचोडिन्। एउता ठुलो तौलियाले आफ्नो आङ धाकिन। निचोदिसकेपछि चिसै भएपनि फेरि लुगा लगाइन र बाहिर निस्किन्। सागर पनि कोठामा आफुलाइ सुकाउने कोशिस गरिराखेको थियो। उ आफ्नो जुत्ता, मोजा, र टिसर्त मिल्काएर नाङ्गो छातीमा थियो र एउता तौलियाले टाउको पुछ्दै थियो। यस्तो अवस्थामा उनिहरुले अहिलेसम्म एकअर्कालाइ देखेको थिएनन् तर जुन गतिमा उनिहरुको प्रेम अघि बढिराखेको थियो त्यसको लागि यो स्थिति अस्वाभाविक भने थिएन। बाहिर निस्कने बित्तिकै प्रेमभावले दुबैलाइ तान्यो र त्याप्प एकअर्कोको अंगालोमा पुगे।अनि हातहरु जीउभरि सलबलाए। "भिजेको लुगा के लाउने" भन्दै सागरले पार्वतीको लुगा फेरि खोलिदियो। अलि डर लागीराखेता पनि पार्वती प्यारमा पुरै गलिसकेकि थिइन र परिस्थितिले उनलाइ निकै कामुक बनाइराखेको थियो। उनी रुमालले जीउ छोपेर बेडतिर गइन र कम्बल भित्र पसिन। "त्यो भिजेको सुरुवालले बेड भिजिहाल्छ नि" सागर जिस्किदै थियो तर सुरुवाल साँचै भिजेको थियो। सागरले नै कम्बल भित्र हात पसाएर सुरुवाल खोल्न कोशिस गय्रो। "नाइ नाइ बिहे नगरी पनि … " पार्वती केहि भन्न खोज्दै थियो। तर सागरको ओठ त्यहि समयमा उसको ओठमा जोडियो र लामो गहिरो किसपछि उनले केहि बोल्न सकिनन्। "भिजेको सुरुवाल नलगाउ पो भनेको त" एकछिन पछि सागर बोल्यो। सागरको हात उनको कम्मरमा पुग्दा उनले अब रोकिनन् बरु इजार खोलेर सहयोग नै गय्रो। उनको सुरुवाल पनि खुल्यो तर उनी कम्बल मुनि थिइन। सागरले पनि आफ्नो पाइण्ट खोलेर मिल्कायो। अण्डरवेयर पनि भिजेकोले त्यो पनि खोलेर फाल्यो र पुरै निर्बस्त्र भयो अनि हाँस्दै कम्बल भित्र पस्न कोशिस गय्रो। पार्वतीले कम्बल त अब निकै कस्सिने गरी बेरेर बसेकी थिइन। उनलाइ भित्र नै राखेर सागरले उनलाइ अंगालो हाल्यो। अनि फेरि चुम्बनको प्रक्रिया शुरु भयो। पार्वतीको हातहरु अब अधैर्यपुर्बक उसको नाङ्गो जीउमा चलिराखेको थियो। अलि स्वर फुटेको समयमा उनले भनिन् "त्यो चाहिँ नगर्ने है डर लाग्छ" अब सागर पनि कम्बल भित्र पुगिसकेको थियो। भिजेको कट्टु र ब्रा त पार्वतीले पहिले नै छोदिसकेको रहेछ, त्यसैले पो उनले कम्बल जोडले बेरेकी रहेछन्। अब कम्बल भित्र पुरै निर्बस्त्र केटा र केटी, दुबै अति कामुक। हातहरु अब जतासुकै चलिराखेको थिए। मुख मुख जोदिएर जिब्रोहरु एकअर्कोको मुख भित्र चलिराखेको थियो। पार्वतीको हात अब सागरको कडा लिङ्ग समातेर चलाइराखेको थियो। सागरको हात उनको योनिमा पुग्दा पार्वतीले त्यो हात च्याप्प समातिन् अनि "प्लीज, डर लाग्छ" भनिन। तर सागर त सबै कुराको लागि पुरै तयार रहेछ। "अब मंसीरमा त हाम्रो बिहे भइहाल्छ" त्यो हात माथिल्याएर दुध चलाउदै सागरले भन्यो, "अनि अनसेफ किसिमले गर्नै पनि त होइन नि"। यति भन्दै उसले भुइँमा भएको उसको पाइण्ट तान्यो र त्यसको खल्तीबाट कण्डोमको पाकेट निकाल्यो। "ल हेर, केटा त खतरा रहेछ, यसैको लागि यहाँ ल्याएको हो कि के हो?" पार्वतीको यो प्रश्नपछि सागर अलि भावुक भयो। अनि एउटा हातमा टाउको अदाएर अर्को हात कम्बल माथिबाट पार्वतीलाइ अँगालो हालेर आँखा आँखामा हेरेर सागर बिस्तारै बोल्न थाल्यो। "पहिलो कुरा त म तिमीलाइ धेरै माया गर्छु, पार्वती, I love you very much. मलाइ खुशी लाग्छ कि छिटै हामी बिहे पनि गर्दैछौं। अनि बैवाहिक जिन्दगीको हरेक जिम्मेवारी लिन म तयार छु। अहिले नै म मेरो भनेर भन्दा हाम्रो भन्ने कुरामा बढि सोच्छु। अनि फेरि अर्को कुरा –मेरो मान्यता हो कि सेक्स विबाहको अति महत्वपूर्ण पार्ट हो र मलाइ त यो भरपुर चाहिन्छ। तर आजै चाहिन्छ भनेको होइन। हामी यसअघिको भेटमा पनि सेक्सुअल युनियनको नजिक पुगेकोजस्तो लागेकोले कहिं एक छिनको बेहोशीले जिन्दगिभर पछुताउनु नपरोस र आबश्यकै परे सुरक्षित तरिकाले मज्जा गर्न सकियोस् भनेर यो कण्डोम खल्तीमा तयारी राखेको हो। कुरा यहि हो अब तिमी कुन किसिमले बुझ्छौ?" "कस्तो अनुभवी जस्तो कुरा गर्दा रहेछौ, धेरै अनुभव छ कि यो कुरामा?" "म तिमीसंग केहि पनि कुरा लुकाउन चाहन्न। हो म रस्सिया पढ्दा मेरा केटी साथीहरु थिए र मेरो उनीहरुसंग यौनसम्बन्ध पनि थियो। तर अब यहाँ आएर तिमीसंग भेतेपछि तिमीबाहेक अरु कुनैसंग कुनै सम्पर्क भएको छैन् र म प्रतिज्ञा गर्छु कि तिमीबाहेक अरु कुनै केटीलाइ फुटेको आँखाले पनि हेर्ने छैन्।" यति भनेर सागरले पार्वतीको निधार, गाला र ओठमा म्वाइ खायो। यतिन्जेल सम्मको कुराले त पार्वतीको हात पनि अब सागरलाइ अंगालो हाल्न पुगिसकेको थियो। "हामी आज प्रतिज्ञा गरौं कि हामी एकअर्काको लागि। मेरो तन, मन धन सबै तिम्रो लागि। अनि हाम्रो बीच कुनै कुरा नलुकोस। मैले मेरो पुरानो सम्बन्धको बारे बताएं, अब तिमीलाइ पनि केहि भन्नुछ भने …" पार्वतीले कस्सिएर अंगालो मारेर "I love you सागर I love you" भन्न थालिन्। "मेरो कुनै अनुभव छैन् त्यसैले डर लाग्छ। मेरो लागि त सबै कुरा भनेको तिमी नै हो। तिमीलाइ पाउन म त पुरा रुपले तिमीमै समर्पित छु। त्यो दिन उनीहरु त्यहाँ दिनभरी बसे र त्यस अवधिमा पाकेटमा भएको तिनैवटा कण्डोम प्रयोग भइसकेको थियो। नगरकोटबाट घर फर्केपछि त्यो रात उनी समयमै सुतेकी थिइन तर राती एकचोटि बिउँझेपछि दिउँसोको कुरा सम्झेर सुत्न सकेको थिएन। आज उनले आफ्नो कुमारीत्व सागरको प्यारमा समर्पित गरेर गुमाएकी थिइन्। यो कुरा भन्दा सागरको कुरामा भएको गहिराइ, परिपक्वता, जिम्मेवारीको बोध आदिले उनको मन जितेको थियो। सागरमा उनले त्यो सबै कुरा पाएको थियो जुन उनले कल्पना गर्न सक्ने कुनै आदर्श पुरुषमा हुन्छ। बत्ती बालेर हेर्दा सागर अझै मस्तसंग सुतिराखेको थियो। सागरको इमान्दारी, खुलामन, परिपक्वताले गर्दा बिवाह पछिका पनि सबै उतारचढाव राम्रैसंग चलेर गइरहेको थियो। मुख्यकुरा सागरको उपस्थितिमा उनले सधै सुरक्षित महशुस गर्न सकेको थियो। यस्तो सुरक्षाको, प्यारको प्रतिक अनि एक अर्काको लागि तन,मन,धन समर्पण गरेको आफ्नो पति उनी कुनै हालतमा गुमाउन चाहन्न थिन्। कतै सागर तारासंग निकै आकर्शित त भएको छैन्? अनि फोटोमा देखेको ताराको शरिर सम्झन पु्ग्यो। अनुहार त अहिले सम्म देखेको थिएन। दुइ बच्चाको आमा भैसकेता पनि ताराको योनि निकै आकर्षक थियो – सायद कपाल सबै सफाचट गरेकोले होला। म पनि भोलि यो जंगल चिल्लो पार्छु, उनले सोचिन्। सागरलाइ ताराको ठुला दुधहरु चलाउन मन लागेको हो कि। अनि फेरि ताराको योनिमा भाइब्रेटर पस्दै गरेको तस्बीर अगादि आयो। अनि त्यहिं केटाको ओठ र जिभ्रो पनि थियो। यस्तो दृष्यको कल्पना त उनले पनि गरेकी थिइन्। सम्झनामा नै उनलाइ काउकुटी लाग्न थाल्यो। रमाइलै पो होला, आखिर त्यो खेलौना त हो। तर साँचै त.. मन मनैको कुरामा पार्वतीलाइ हास्न मन लाग्यो। अनि अन्त्यमा निद्रा पनि आउन थाल्यो।भोलि पल्ट दिउसो घरमा कोहि नभएको समय थियो। हिजो रातिको कुरा पार्वतीले सम्झेर उनी आफ्नो कोठामा गइन्। बेडमुनिबाट त्यो भाइब्रेटर निकालिन् र निकै ध्यान दिएर हेर्न थालिन्। फिल्महरुमा देखिने गोराहरुको जस्तो देखिने त्यो खेलौना साँचैको लाडो जस्तै थियो। उनले त्यो लाडोलाई मुट्ठीमा समातिन् र हात तल माथि हल्लाउन थालिन् – जसरी उ सागरलाइ गर्नै गर्थिन्। एक्लै यस्तै चलिराख्दा उनलाइ काउकुती लाग्न थाल्यो। उनले त्यो लाडो आफ्नो लुगा भित्र लगिन र योनिमा छुवाइन्। काउकुती झनै बढ्यो। अनि उनी बेडको छेउमा बसिन र सुरुवाल र अण्डरवेयर खोलिन्। अनि त्यो लाडोको टुप्पो आफ्नो पुतिमा पसाइन् र त्यसको स्वीच अन गरिन्। झुनझुन भाइब्रेट भए पछि उनले अलि अलि गर्दै करिब करिब पुरै लाडो आफुमा घुसाइन् र भित्र बाहिर खेलाउन लागिन्। जति गय्रो त्यति नपुग्ने। अब त उनले जोड जोडले आफ्नो कम्मर पनि त्यो लाडोमा थेलिरहेकि थिइन्। राती उनीहरु निसंकोच त्यो लाडोलाइ पनि संलग्न गरि सेक्स गरे। पार्वतीले पनि आफ्नो पुतिमा मुख र लाडो दुबैको एकैसाथ अनुभव गरे। तर दुइ तीन पल्ट पछि त्यो खेलौनाको उपयोग कमै मात्र हुन थाल्यो। आखिर त्यो ज्यान नभएको खेलौना भन्दा बढि त केहि थिएन्। बिचमा भुषणसंग MSN मा सम्पर्क हुंदा अरु कुराको साथसाथै भाइब्रेटरको अनुभव कस्तो भयो भन्दै सोधेको थियो। भएको कुराहरुको निसंकोच जानकारी आदानप्रदान भयो। फिर्त्ता गर्ने कुरा गर्दा, हतार नभएको र बिस्तारै लिउँला भन्ने कुरा भुषणले गरेको थियोकेहि हप्तापछि फिर्त्ता गर्नको लागि फेरि भेट हुने कुरा भयो। सके चारैजना भेत्नेकुरा भएको थियो। कार्यक्रम अनुसार दिउसै एउटा सपिङ्ग सेन्टरमा भेट्ने कुरा भयो। तर पछि साचै जाने दिन, पार्वतीले जान मानिनन्। सागर मात्रै गयो। भुषणसंग तारा पनि थियो। पसल बाहिर भेटेर एकछिन कुराकानी भयो। सागरले तारालाइ "भाउजु, नमस्कार" भने। ताराले नमस्कार मात्र फर्काइन, खासै केहि कुरा गरिनन्। भुषणसंग भने उसको प्रोजेक्टको बारे अलि लामै कुरा गय्रो। भुषणलाइ उसको प्रोजेक्टमा एउटा सफ्तवेयरको काम थियो र त्यसको लागि उसले सागरलाइ गर्न इच्छुक छ कि भनेर प्रश्न गरे। दुइ तीन दिन पछि सागरले प्रोजेक्टको साइत हेर्ने इच्छा ब्यक्त गय्रो।
Posted by tshrestha at 4:57 AM No comments:
नाङ्गो फोटो ..................
Posted by tshrestha at 4:53 AM No comments:
Posted by tshrestha at 4:32 AM No comments:
ए, झर्नुभो आमा ? यतै आउनुहोस् न।
घरबेटी आमैलाई पसलभित्र बस्ने ठाउँ छोडी दिँदै पसल्नी चाहिँ नखोलेको साबुनको कार्टुनमाथि बसिन्। दिउँसोको समय हुनाले पसलमा ग्राहकहरु थिएनन्। बानेश्वरको यो शाखा सडकलाई चैते घाम र धुलिकणयुक्त बतासले लतारिरहेको थियो।
अँ, के गर्दैछस् सुमनकी आमा ? ठाडै निदाइस् कि क्या हो ? तिमेरु बीसे-बाइसे तरुनीहरुलाई त निद्राले पनि खुब मन पराउँछ। नातिनी पनि तेरो भानिजसँग पढ्ने झरिगई। एकछिन सुत्‍न पर्‍यो भनेर पल्टेकी थिएँ, निद्रा लाग्नु त कता हो कता ढाड मात्रै बिझायो। …अनि यता झरेकी पहिला, हातले टेकेर अडी अडी बस्दै आमैले भनिन्, उमेरले छोडेपछि उठ्न पनि गार्‍हो बस्न पनि गार्‍हो।
पसलमा बस्दाबस्दै उङ्न लागेकी पसल्नीलाई घरबेटी बूढी गफिन आउँदा मजै लाग्यो। सत्र वर्षदेखि वैधव्य जीवन बिताइरहेकी आमैको एक्ली छोरी महाराजगञ्जमा बस्थिन्। तिनै छोरी सुत्केरी परेकीले उता गएकी आमै महिना दिनपछि हिजो मात्रै घर फर्केकी थिइन्। छोरीलाई सुत्‍केरी हुनुअगाडि नै बानेश्वर ल्याउने विचार थियो आमैको। तर मधेशतिरका घमण्डी इञ्जिनियर ज्वाइँले मानि दिएनन्। जेठो छोरा सपरिवा अमेरिका बस्थे। बूढी खासमा जेठोलाई अमेरिका जान दिने पक्षमा थिइनन्। तर केही नलागेपछि ठूली नातिनी चाहिँ खोसेर आफूसँगै राखेकी थिइन्। कान्छो छोरा रवि र नातिनी खुश्बुसँगै आमै सिरान तलामा बस्थिन्। प्रभावशाली विद्यार्थीसमेत रहेका रवि घरमा कमै अडिन्थे। चौध वर्षीया नातिनीको स्कूलमा आन्तरिक परीक्षा आएको हुनाले पढ्ने छुट्टी थियो।
दुई वर्षअघि यो घरको बीच तलामा डेरा सरेपछि भूँइतलाको एउटा सटरमा दोकानसमेत खोलेकी पसल्नीलाई प्रायःजसोले रविकै सिको गरेर दिलमाया नाममा भाउजु जोडेर सम्बोधन गर्थे। घरबेटी आमै चाहिँ दिलमाया कै छोराको नाम जोडेर सुमनकी आमा भन्थिन्। गोरो वर्ण, मिलेको नाक नक्सा र बन्किलो शरीरकी व्यवहार कुशल दिलमायालाई छोरी झैँ गरेर अर्ती-स्नेह पनि दिइरहन्थिन्। दिलमाया पनि बूढियाको कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन्दै सही थाप्थिन्। नत्र आजकल बूढाबूढीको कुरा को सुन्छ र ?
मैयाँको जीउ हलुङ्गो भइहाल्यो। रहर गरे अनुसार छोरै भएछ। अब त जानु पर्दैन होला, हैन आमा ? आमै सजिलोसँग बसिसकेपछि दिलमायाले सोधिन्।
अब केलाई जानु परेको छ र ! सुसार गर्ने एउटी आइमाई छे जे गर्नु त्यसैले गर्ली। अँ, अनि के भो त तेरो जग्गाको मामला ? सकियो ?
आमैको हिमाल झैँ कपालमा अल्झिन पुगेको धागोको एउटा त्यान्द्रो टिपिदिँदै दिलमायाले उत्तर दिइन्, खै के भन्नु र आमा, त्यसमा त झमेला परेर हैरान भयो नि धन्न सानोबाबु हुनुहुन्थ्यो र कत्रो मद्दत गरिदिनु भयो। कति दिन त पसल बन्द गरेर हिँड्नुपर्‍यो। बिचरा रविबाबु सार्‍है जाति हुनुहुन्छ आमा।
खै के जाति भन्नु र ? यी बज्याबजिनीहरुले त मेरो मासु खाइसके। …ए नानी, लौ न तेरो सिपालु हातले मेरो कपाल ठुंगी दे दे। दिलमायाले छोइदिएपछि आमैको कपाल सक्सकाउन थालिसकेको थियो। विस्तारै ढल्केर टाउको दिलमायाको काखमा राखिदिइन्।
एकछिन घरमा बस्दैन। आज पनि बिहानैदेखि बेपत्ता छ। त्यो भतिजीलाई यसो पढाइ दे न बाबु भन्यो….छैन। फेल भई भने जेठालाई मैले के जवाफ दिनु ? …साँच्ची तेरो भान्जाको नाम के रे नानी ?
हो रमेश। दश खेप सोध्यो बिर्सिजान्छु….। बरु त्यसले पो राम्ररी सिकाइ दिँदो र’छ। तँलाई पनि सघाएकै देख्छु। कति ज्ञानी केटा।
उतिखेरै मम्मी भोक लाग्यो भन्दै साढे चार वर्षे सुमन स्कूलबाट आइपुग्यो र रित्तो टिफिन क्यारियर सो केश छेउमा राख्‍दै पसलभित्र छिर्‍यो।
ए, लौ, कति चाँडो तीन पनि बजिसकेछ, दिलमाया झस्किइन्।
लु आइज नाति ! राजा बस्ने ठाउँमा भ्यागुताको ठसमस् हगि ? तेरो गद्दीमा त म बूढी पो बसेछु, सीधा भएर बस्दै आमैले भनिन्। सुमन आमाको काखमा गएर बस्यो। उसका पुक्के गालाहरु घाममा रन्किएर राताराता भएका थिए। दिलमायाले छोरालाई काखमा राखी राखी र्‍याकमुनिबाट आधा दर्जन मालभोग केरा निकालिन्। सुमनले तानेर सबै लिइहाल्यो।
त्यसो नगर न बाबा। खै त….खै, खै, हजुरआमालाई पनि दिउँ। नत्र हजुरआमा रिसाउनु हुन्छ- उठ्दै गरेको छोरालाई दिलमायाले तानेर काखैमा राखिन्। लोभी मोरो- आमैले सुमनको गाला थप्थपाइन्।
ल छोरा, माथि कोठामा जाउ र लुगा फेरेर केरा खाँदै गर। एकछिनमा म आउँछु र बाबालाई फेरि दूध र अण्डा बनाइदिन्छु। दिलमायाले छोरालाई उठाइन्।
बिस्कुट पनि है मम्मी !
सुमन दोकाबाट निस्केर माथिल्लो पट्टीबाट सिँढीतिर मोडियो। सिँढी चढ्दाचढ्दै आमा चाहिँ कराइन्- वल्लो कोठामा भान्दाइ र खुश्बु दिदी पढ्दै हुनुहुन्छ। डिस्टर्ब नगर है बाबा।
अनि ऐ नानी, तेरो सुमनको बाउले पैसा कहिले पठाउने भो त ? फोन गर्दैछ ? आमैले कुरा झिकिन्।
पैसा त भएको जति सबै अस्ति नै पठाइहाल्नुभएको होला। घडेरीमा लगाइहालियो। फोन चाहिँ अस्तिको हप्ता पनि गर्नुभएको थियो। अहिले त उता पनि त्यति राम्रो छैन अरे। छँदाखाँदाको जागिर छोडेर हिँडेको मान्छे…..हेरौँ के हुन्छ। एउटा ग्राहकलाई साबुन र टुथपेस्ट दिँदै दिलमायाले उत्तर दिइन्।
अलिक होस् गरेर व्यवहार गर है नानी। लोग्नेलाई पनि अलिक चेप्। हाम्रो जस्तो हुँदै न परायको मुलुकमा। नखरमाउलीहरु कोठी खोलेर बसेका हुन्छन् अरे। लोग्नेमान्छे भनेको रण्डी देख्‍दा घर बिर्सिने जात हो। ….गा’को पनि दुई वर्ष पुग्यो हैन ?
“उन्नाइस महिना भयो….” दिलमायाले वाल्ल पर्दै उत्तर दिइन्।
जग्गा भएपछि घर बनाउने मेसो पनि मिलाउनु पर्छ। आफू पनि होस गर। नचिन्नेहरुलाई तँलाई एउटा बच्चाको माउ भन्दैनन्…। मात्तिएलिस्। बूढीले साँचो मनले अर्ति दिइन्।
”छ्या आमा पनि…।”
”के छ्या भन्छेस पाँ पाँचवटाकी आमाहरु पनि ६ महिना लोग्ने बाहिरिँदा भूँडी बोकेर बेहाल भा’का छन्। लोग्ने चाहिँले त अर्की भेटिहाल्छ, छोराछोरीको पो बेपत्ता हुन्छ। टाढाको कुरा के गर्नु….” बूढीले आँखा चनाखो पारेर बाहिर हेरिन्। कोही आएका थिएनन्। ”माथ्लो तलामा तिमेरु आउनु अगाडि एउटी फूँडी बस्थी। लोग्ने चाहिँ उता जापान हो कि कता गा’थ्यो। पैसा पनि साफ्फी नै पठाउँथ्यो। राँडीले यहाँ नागा नचाउन थालिहालिछे ! हेर है उसको निको चाला नदेखेपछि सम्झाउनलाई यसै खै-खबर गर्न खोज्दा ‘महिना पुगेपछि भने जति भाडा दिएकै छु अरु कुरा तपाइँलाई के मतलब’ भन्दै उल्टै च्याँठिन्थी।”
एकक्षण अडिएपछि स्वर अलिक सानो पारेर आमैले भनिन्- ”पछि त राँडीले सात महिना पुगिसकेको पाठो फालिछे। नन्द चाहिँले थाहा पाइछे, धुनधान गरेर थुनाइ। आइमाइको चाहिँ मति बिग्रेपछि त नानी….।”
त्यति नै बेला भुइँतलाको पछिल्लो कोठामा बस्ने ठकुरानी चिरीच्याट्ट परेर आइपुगी। तीन महिना अगाडि बिहे भएर लोग्नेसँग काठमाडौं आएकी गोरखपुरकी कृष्णवर्णी ठाकुरानी बीसी एक्काइस वर्ष जतिकी थिई। ऊ पसलमा दूध र पाउरोटी लिन आएकी थिई। पल्लो चोकमा स्यालुन खोलेर बसेको उसको लोग्ने खाना खान आउने बेला भएको थियो।
”हेर यो मधेसिनीको चाला ! हेर नक्कल यसको ! दिनभरि ऐना हेर्‍यो पोइ पर्ख्यो। यस्ती डँडाक तरुनीको काम त्यति छ। हैन यो मधिसे मोराहरुको स्वास्नी चाहिँले सिन्को भाँच्नु हुँदैन कि क्या हो, हँ ?” आमैले चखिलो पाराले विषय बदलिन्।
दिलमायाले मुसुक्क हाँस्दै पाउरोटी र दूध सो-केशमाथि राखिदिइन्। ठकुरानी पनि मुसुक्क मुस्कुराई। बाक्लो लिपिस्टिक पोतिएका उसका ओठहरु बिस्तारै चलमलाए। मसिनो स्वरमा भनी- ”उहाँ गाउँमे खेतीवाडीको काम भइजान्थ्यो । इहाँ त…।”
ठकुरानीको सरलता देखेर आमैको बूढो अनुहारमा स्नेहयुक्त मुस्कान फैलियो। फेरि जिस्काइन्- ”गाउँमे त खेतीवाडी गर्थिस्। अब यहाँ चाहिँ दिनभरि नक्कल पार्दै मुर्कुट्टालाई खान र सुत्‍नमा साथी दे मोरी !”
”अहिले त त्यसमै ठीक छ आमा ।”
दिलमाया खित्का छाड्न थालिन्। बूढीमान्छे खित्का छोड्न नसकेर खोक्न थालिन्। ठाकुरनी वाल्ल परी।
ठीक त्यति नै बेला सुमन पसलमा प्रकट भएर बडो शङ्कास्पद हाउभाउमा इसारा गर्दै आमालाई बोलाउन थाल्यो। चाल रहस्यमय थियो। मुखले केही बोलिरहेको थिएन। तर ओठमा अर्धमुस्कान थियो।
”के भन्छ छोरा ?” उठ्ने उपक्रम गर्दै घरबेटी आमैले भनिन्- ”लौ म पनि गएँ। खुश्वु भोकाई। बेला बेलामा खान पाइन भने रुन्छे पो त्यो त।”
”के भो छोरा ? किन भन त…?” दिलमायाले सोधिन्। सुमनले चोर औंला ओठमाथि सङ्केत गर्दै अर्को हातले एक पटक माथि जाउँ भन्ने इसारा गर्‍यो। ”आमा एकै छिन् बसी दिनुस् है। यस केटाले त हैरान पार्छ।… ए ठकुरानी लौ तिम्रो सामानहरु लैजाउ।”
”लिख्नुको छ… दिदी”
दिलमाया पसल बाहिर निस्कनासाथ छोरा चाहिंले ट्याप्प उनको हात समात्यो र सिंढीतिर तान्यो। तलमाथि पुगेपछि फेरि एकपटक ‘चुप’को सङ्केत गर्दै आमालाई त्यहीं उभिन लगायो र पन्जाको भरले टेकेर भान्दाइको ढोका अगाडि उभियो। एक निमेष सङ्कोचयुक्त नजरले आमालाई हेर्‍यो अनि ढोकाको कि-होलमा आँखा राख्यो। त्यहाँबाट तुरुन्तै आँखा हटाएर अलि-अलि हच्किँदै इसाराले आमालाई बोलायो। आमा नजिक आएपछि कि होलतिर संकेत गर्‍यो। छोराको रहस्यमय गतिविधिबाट उत्सुक बनेकी दिलमायाले कोठाभित्र चियाइन्।
हे भगवान् ! यो के देख्‍नुपरेको !! हे कली !!! बूढीले थाहा पाइन् भने ? उनी अत्तालिन थालिन्। मुटु जोडले उफ्रन थाल्यो।
भित्र कोठामा किताबहरु टेबुलभरि छरिएका थिए। पट्टाएर राखेको सिरकमाथि भान्जाको बुट्टेसर्ट मिल्किएको थियो। खुश्बु सिरानी लगाएर फ्लोर कार्पेटमाथि पल्टेकी थिई। उसको टिसर्ट उँभो सरेको थियो। भान्जा र खुश्बु आपत्तिजनक अवस्थामा थिए।‌
दिलमायाको सर्वाङ्ग कामेर आयो। लौन नि अब के गर्ने ? कराउने ! के भनेर कराउने ? उनले तत्काल केही निर्णय गर्नै सकिनन्। दिमाग शून्य भएर आयो। अचानक केही सोचे झैँ गरी फेरि चियाइन्। रमेश र खुश्बु दुवैको जिन्स प्यान्ट यथास्थानमा नै थिए।
दिलमायालाई अलिकति राहतजस्तो भयो। छोरातिर पुलुक्क हेरिन् सुमन नजर भगाउँदै मुस्कान दबाइरहेको थियो।
उम्रिँदैको तीन पाते ! दिलमायाले दाह्रा किटिन्। गाला चड्काइदिन उठिसकेको हात मुस्किलले थामिन्। निमेषभर के गरौं र कसो गरौंको किंकर्तव्यविमूढतापछि हान्निएर आफ्नो कोठामा पसिन्। छोरा पनि पछि-पछि लाग्यो। तर कोठामा सङ्कटको समाधान थिएन। उता के भइसक्यो भन्ने पिरोलोले औडाहा भइरहेको थियो। यत्तिक्कैमा फनक्क फर्किइन् र भान्जाको कोठा अगाडि जोडदार रुपमा चप्पल पड्काउँदै तल झरिन् अनि आफूलाई भरसक सामान्य बनाउने प्रयास गर्दै भनिन्- ”आमा ल अब जानुहोस् ।”
”के भएछ ?” बल गरेर उठ्दै बूढीले सोधिन् ।
“केही पनि हैन आमा ! यो छ नि एउटा तीनपाते कली व्यक्त भएजस्तो छ। अहिले नै यस्तो छ झन्…” दिलमायाले हत्तपत्त भनिन्।
“अँ कली चाहिँ धपक्कै बलेको छ। होस गर। ल म चाहिँ हिँडे। खुश्बु भोकले मरिहोली।”
दिलमायाको मन पोलेको पोलै थियो। माथि के भइसक्यो आमै चाहिँ खुश्बुको रट लगाको लगाकै थिइन्। बूढी सिंढीमा पुग्दानपुग्दै उनी फुत्त बाहिर निस्किन् र उँभो हेरिन्। झ्यालमा पर्दा टम्म मिलेको थियो। उनलाई पसेर दुईटैलाई बेस्सरी भकुर्न मन लाग्यो। तर सोचेर बस्ने समय थिएन। टोलै थर्किने गरी कराइन् -”ए भान्जा ! ए रमेश भान्जा !! हैन किन नसुने झै गर्‍या हँ !!! दिनभरि ढोका थुनेर बसिरहने, तल झर्नु पर्दैन ?”
दिलमायाको अनुहार उत्तेजनाले तम्तमाइरहेको थियो। सुमन चाहिँ खाजासाजा बिर्सेर चुपचाप बसिरहेको थियो। एउटा ग्राहक आएर कोकाकोला र चुरोट माग्दै सो केसछेउको मुढा तानेर बस्यो। सफारी सुट र सनग्लासले सजिएको त्यो अधबैँशे ग्राहक आरामसाथ तिर्खा र अम्मल मेट्न थाल्यो। ग्लासभित्रका उसका आँखा अझ तिखा भएर उत्तेजित साहुनीको चाल र चेष्टाहरुसँगै दौडिन थाले। उसका आँखाहरुले आफ्नो आकार अहङ्कार नापिरहेको चाल पाएपछि दिलमायाले तीरजस्ता तीखा आँखा पारेर सोधिन् अरु के चाहिन्छ दाइ ?
आजलाई यत्ति नै भलादमीले ङिच्च गर्दै सहज उत्तर दियो। निर्लज्ज दिलमाया भित्रभित्रै मुर्मुराइन्। त्यति नै बेला बुट्टे सर्टमा ठाँटिएर भान्जा आइपुगे।
किन कराउनुभएको माइजू ?
दिलमायाले पुलुक्क हेरिन्। भान्जा चाहिँ उनैलाई हेरिरहेका थिए। न कुनै लाज, न त कुनै धक मानौँ केही भएको छैन। अलिकति कुरीकुरी त लाग्नुपर्ने हो नि, कस्तो बित्पाते ! दिलमायालाई फेरि झनक्क रिस उठ्यो।
किन नि अब….ल यहाँ पसलमा बस्नुस्। त्यो दाइसँग पैसा लिनुस्, उनी च्याँठिइन्। आमा र भान्दाइको मुखतिर हेर्दै कुटील मुस्कान दबाइरहेको सुमनलाई पनि आँखा तरेर हेरिन्। ऊ सडकतिर हेर्न थाल्यो। त्यसपछि र्‍याकबाट चार वटा फूल टिपेर कोठातिर चढिन्।
कोठामा पुगेर थचक्क खाटमा बसिन्। के गरौँ कसो गरौँ भइन्। केही क्षणपछि उठिन् अनि खाजा पकाउनको साटो बाथरुममा पसेर लुगा धुन थालिन्। भिजेका कपडाहरु बाल्टीबाट झिक्दै धुने क्रममा भान्जाको स्कूले प्यान्ट हातमा आयो। टक्क अडिएर त्यसलाई अनौठो गरी हेरिन्। भान्जाको कपडाहरु दिलमायाले नै धोइदिने गरेकी थिइन्। तर, आज उनलाई कसो कसो दिगमिग लागेर आयो। त्यसलाई कुनातिर फ्यात्त फालिन्।
बाँकी कपडँ धोई सक्दावर्दा उनी सामान्य भइसकेकी थिइन्। साँझ पानी पर्न लागेको थियो। उनी बाथरुमबाट निस्कँदा सुमन निन्याउरो मुख पारेर खाटमा बसिरहेको थियो।
के भयो छोरा ?
मम्मी भोक लाग्यो। उसले आँखा पिलपिल पारेको देखेर दिलमायाको मन कटक्क खायो। चिसै हातले छोरालाई टपक्क टिपेर किचेनमा पुगिन्। सुमनलाई बोकी बोकी ग्यास स्टोभ बालेर एकातिर दूध र अर्कोतिर ताई बसालिन्। अण्डा पकाउने भएपछि छोरालाई कुनाको कुर्सीमा राखिन्। ताई तात्दातात्दै फुल फिटिसकेर बत्ती बाली नमस्कार गरिन्। सुमन प्रसन्न भइसकेको थियो।
मम्मी, देउतालाई नमस्ते गर्नु भाको हो ?
ड्याडीले पनि गर्नुहुन्छ हो ?
अँ गर्नुहुन्छ। उहाँले नै मलाई सिकाउनु भएको ।
सुमन कुर्सीबाट बिस्तारै ओर्ल्यो अनि छेउमा गएर लाडिँदै आमाको कम्मर समायो। दिलमायाले फिटेको फुल ताइमा हालिन्।
मम्मीको बुबु मैले खाको हगि मम्मी ?
हो बाबा, बाबाले खा’को।
ड्याडीले पनि खानु भा’को हो मम्मी ?
ड्याडीले ड्याडीको मम्मीको खानुभयो।
मम्मी, तलको ठाकुर अङ्कलले त ठाकुरनी अन्टीको बुबु खानुहुन्छ त ?
के भन्छ यो ? कैले देखेको ? उनी सशङ्कित भइन्।
चिया-खाजा खान आउँदा अङ्कलले सँधै ठकुरानी अन्टीको बुबु…….
छोराको वाक्य पूरा नहुँदै दिलमायाको थप्पड उसको गालामा बज्रियो।
कलीले छोएको उम्रिँदैको तीनपाते। नाइटो खसेको छैन वेश्या कुरा गर्छन् ? ….ला मर ! ढाडमा अर्को मुड्की थपिन्। सुमनले अररिँदै एउटा हात घुमाएर ढाडमा पुर्‍यायो। अर्कोले गाला थिचेको थियो। आँसुसरी भएको थियो तर रोएको थिएन। दुखाइको अधिकता र त्यसलाई सहँदा परेको बलले गर्दा अनुहारबाट रगत चुहेला जस्तो भएको थियो। अरु बेला छ्यास्स छुँदा पनि रोएर घर उचाल्ने सुमन आज ढिट भएर बसेको थियो। त्यो देखेर आमा चाहिँको रिसको पारो झन् चढ्यो।
जा कोठामा गएर पढन् थाल…सुनिस् ? अर्को मुड्की थपिन्।
हत्प्रम र आश्चर्यचकित भएकी दिलमाया थचक्क कुर्सीमा बसिन्। उनको शरीर जडवत् र मस्तिष्क संज्ञासून्य भएर आयो। नाबालक छोराको कुराले उनलाई कुनै अज्ञात अन्तरिक्षको शुन्य उडानमा हुँइक्याइदिएको थियो। विस्मित आँखाहरु मोल्दै विस्तारै सचेत हुने प्रयास गर्न थालिन्। यत्रैमा कसरी जानेको ? लुकीलुकी चियाउन पो थालेछ। अब के गर्ने ? उनी अस्पष्ट सोचाइमा हराउन थालिन्।
मम्मी ! यत्तिकैमा आक्रोशले राँकिएको तीव्र आवाज आयो। झसङ्ग भएर हेरिन्। ढोकामा सुमन कुनै घाइते सर्प झैँ फुँकार गरिरहेको थियो। आँसु थामिएका उसका कलिला आँखाहरुमा प्रतिशोधको चमक थियो। उसले आफ्नो सानो चोर औँला रिभोल्वर झैँ आमातिर सोझ्यायो।
पख्‍नुस् मम्मी, म ड्याडीलाई रवि अङ्कलले तपाईँको बुबु खा’को भनिदिन्छु, उसले बम विस्फोट गर्‍यो।
बम यति शक्तिशाली र अनपेक्षित थियो कि छोरालाई हपार्न उठ्नै लागेकी दिलमाया तत्कालै धरासायी भइन्। स्तब्ध, अवाक् र आतङ्कित दिलमायाको आँखामा अचानक आँसु भरिएर आए। सङ्लो पानीले माछाको जस्तै भएका विस्मित आँखाहरुले ढोकामा उभिएको छोरालाई धमिलिँदै टाढा हुँदै गएको जस्तो देख्‍यो। उनको ह्रदय कहालिन खोज्यो। तर आँखाको बाँध फुटेपछि फेरि छोराको आँखामा आगो उम्लिरहेको देखिन्। ऊ प्रहार गर्न तम्तयार थियो। छोराको हेराइको सामना गर्न नसकेर दिलमायाका आँखाहरु भूँइतिर लत्रिए। उनको सम्पूर्ण शरीर र आत्मा अपमान, शरम, अपराधबोध र घृणाले गल्न थाल्यो। ओठमुख सुक्न थाले। हे नारान, धर्ती फाटिदिए त्यहीँ बिलाउनुहुन्थ्यो।
हजुरआमा सुदेश्ना आन्टीको नानी पाउनु जाँदा पसल थुनेर अङ्कललाई बुबु खुवा’को…..
दिलमाया कान थुनेर त्यो तातो झिरबाट बच्न चाहन्थिन्। तर हातहरु जड भइसकेका थिए। मुखमा प्रतिकारको शब्द थिएन।
अस्ति राति फुच्चे सुत्यो भनेर अङ्कलले मलाई भूँइमा झारेपछि म एक्लै सुतेको…सुमनको स्वर अड्किन थाल्यो। ….मलाई जाडो पनि भयो। मलाई…….बेस्सरी चित्त दुखेर उसको घाँटी पनि जम्न थाल्यो।
मम्मी, मलाई डर पनि लाग्यो….यति भनेर बर्रर आँसु खसाल्दै चिच्यायो, मम्मी ! सुमन दौडेर आएर कुर्सीमा थुप्रेको आमाको काखमा मुख गाडेर हिक्कहिक्क गर्न थाल्यो। छोराको प्रत्येक हिक्काले दिलमायाको मुटुको कचुर काटिरहेको थियो। आतङ्कले सुकेर बिस्तारै उदासिन हुन थालेका उनका सुश्क आँखाहरुमा फेरि मूल फुट्न थाल्यो। तर पनि छोरालाई टिपेर छातीमा टाँसी हाल्न सकिनन्।
त्यति नै बेला खुश्बु दौडँदै आइपुगी। चुलबुले आँखाले आमाछोरालाई हेरेर छक्क पर्दै भनी, के भयो आन्टी ? कोरियाबाट अङ्कलको फोन छ। होल्डमा हुनुहुन्छ, छिटो आउनुस्।
Posted by tshrestha at 4:28 AM 1 comment: